Maxay u jiraan yaraanta oksijiinta ee bukaanjiifka qarsoon?
Sababta cosbitaalada qaar ay u la'yihiin oksijiin si ay u sii noolaadaan bukaanka ka baxsan saadka laga heli karo isbitaalada, gaar ahaan Hindiya - tusaale kale oo ah sida dunidu aysan ugu diyaargaroobin wax ka qabashada cudurka faafa ee Covid-19.
Naxdinta ugu dambeysa ee safka faafa ayaa ah in dad aad u tiro badan oo dunida ku nool ay u dhimanayaan helitaan la’aan oksijiin caafimaad,
gaar ahaan Hindiya
. Maalin kasta, tobanaan kun oo qof ayaa la dhigaa isbitaalada iyada oo loo yaqaan 'Covid-19', taas oo keentay baahida loo qabo oksijiinta oo aad uga fog bixinta. Ogsijiin waxay ka kooban tahay boqolkiiba 21 jawiga. Shirkado faro ku tiris ah ayaa qabta oo si nadiif ah u sifeeya, laakiin intabadan waxay ka iibiyaan warshadaha. Qaar badan oo ka mid ah gobollada ugu saboolsan adduunka ma haystaan ​​kaabayaal ay ku gaarsiiyaan ama ku isticmaalaan sahayda heerka caafimaad ee la iibiyay.shirkadahaas, oo loogu talagalay in lagu geeyo tuubooyin qolalka cisbitaalka.
Isbitaalada iyo rugaha caafimaadka qaarkood waxay leeyihiin mashiinno soo saara oksijiin saafi ah oo aad uyar, laakiin kuwani waa dhif iyo naadir. Isbitaalo badan iyo bukaanno badan oo ku nool waddamada saboolka ah iyo meelaha fog fog waxay ku tiirsan yihiin ikhtiyaarka ugu qaalisan: harooyinka oksijiinta oo ku yaraaday waddammada sida xun uu u saameeyay fayrasku.
Dhibaatooyinku waxay saameynayaan bukaanada leh dhammaan noocyada cilladaha neefsashada ee u baahan oksijiinta, ma ahan oo keliya kuwa qaba Covid. Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa bishii Febraayo ee sannadkan sheegtay inay qaadanayso $ 1.6 bilyan oo doollar si loo hagaajiyo oksijiin yaraanta sannad jirta; hadda qiyaastaasi waxay mareysaa $ 6.5 bilyan. Dadaalo lagu doonayay in lacagtan lagu soo ururiyo ayaa guuldareystay, inkasta oo ay tahay qayb yar oo ka mid ah wixii ku baxay talaalada iyo taakulaynta dhaqaale ee caruurta.shirkadaha iyo shaqaalaha.
Waa kuwan jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha laga weydiiyay dhibaatada oksijiinta.
one shaqaale buuxinaya taangiyada oksijiinta oo ah adeeg bilaash ah oo ay bixiso dowladda Iztapalapa, Mexico. Labadii bilood ee la soo dhaafay, baahida caalamiga ah ee aan la daboolin ee oksijiin caafimaad ayaa ka badan saddex jibaar.
Amaah ... Luis Antonio Rojas oo loogu talagalay Hfrance.fr
Sidee ayey ku xumaatay, oo deg deg ah ?
Marka la fiiriyo baahida weyn ee muuqata ee oksijiinta inta lagu jiro aafada saamaynaysa habka neefsashada, dhibaatadu may ahayn inay ku noqoto lama filaan. Laakiin sanad gudihii uu go'aanka gaarayaa uu ka guurayo mid ka mid ah caqabadaha aafada ah una gudbayo mid kale - P.P.E. yaraanta, xirnaanshaha, halista dhaqaale burburka, iskuulada fog, daaweynta, talaalada - oksijiinta waligeed ma gaarin meesha ugu sareysa liiska.
wuxuu lahaa mudnaan ku filan, ”ayuu yiri Robert Matiru, oo ah agaasimaha barnaamijka ee Unitaid, oo ka mid ah kooxaha caafimaadka bulshada ee caalamiga ah ee ka shaqeeya wax ka qabashada yaraanta Hay'adda Caafimaadka Adduunka.
Xitaa kahor faafida, qaar kamid ah gobolada ugu saboolsan ayaa awoodi waayey inay hubiyaan sahayda. Laakiin ma ahayn ilaa horaantii sanadkan in oksijiin yaraanta diley ay ku dhufato
, Mexico , iyo meelo kale, in ay cadaatey in waxa loo arkey dhibaato suura gal ah ay noqotey degdeg ah. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa abuuray guddi howleed deg-deg ah oo ku saabsan oksijiin la'aanta waxayna ku baaqeen lacag si wax looga qabto. Kadib
faafa ayaa ka qarxday Hindiya
, halkaas oo ay inyar ka koobnayd, riixitaanka sahayda oksijiinta ee bartamaha indhaha adduunka. Tirada rasmiga ah ee India ee cudurada cusub ee loo yaqaan 'coronavirus virus' ayaa ka kacday celcelis ahaan ku dhowaad 11,000 maalintiiba bartamihii Febraayo ilaa bilYenne maalinle ah oo kabadan 370,000 usbuucii lasoo dhaafay - waxayna khubaradu sheegeen in tirada runta ah ay intaas kabadantahay. Labadii bilood ee la soo dhaafay, baahida caalamiga ah ee aan loo baahnayn ee ogsijiin caafimaad ayaa in ka badan seddex laab ka yar wax ka yar 9 milyan oo mitir cubic maalintii ilaa in ka badan 28 milyan, sida ay sheegeen kooxaha isbahaysiga gargaarka ee la socda dhibaatada .
Qiyaastii kalabar baahidaas aan la daboolin waxay ku taal Hindiya. Dadka u ololeeya caafimaadka waxay ka digayaan masiibada inay ku soo noqnoqoto dalal kale.
Taangiyada dareeraha ah ee dareeraha ah ee ku jira isbitaalka El Paso.
Joel Angel Juarez ee Hfrance.fr Sidee loo sameeyaa oksijiinta loona bixiyaa? Wadamada hodanka ah, isbitaalada waxay caadi ahaan ku tiirsan yihiin booyadaha si ay u keenaan biyo badan oo oksijiin dareere ah, oo aad uga cufan hawada caadiga ah, oo lagu keydiyo konteenarro waaweyn. Nidaam ka mid ahTuubooyinku waxay nuugaan gaaska, oo u oggolaadaan inay ku sii fidaan cufnaanta caadiga ah, una qaybi sariirta oo dhan. Tani waa tan ugu kharashka badan ee habka wax ku oolka ah ee loo bixiyo oksijiinta, shirkadaha keena oksijiin tiro badan waxay leeyihiin awood wax soo saar ku filan oo ay ku daboolaan baahida caafimaad ee adduunka. Toddobaadyadii la soo dhaafay, qaar ka mid ah waxay bilaabeen
inay dardar geliyaan wax soo saarkooda qalabka caafimaadka iyagoo u weecinaya qeyb ka mid ah warshadaha
, oo gaaskiisu leeyahay xoogaa dalabyo kala duwan ah.
Dowlada India ayaa ku amartay soo saarayaasha inay si ku meel gaar ah u hagaan dhamaan wax soo saarkooda oksijiin baahiyaha caafimaad.
Laakiin cosbitaalo badan oo aduunka ah uma qalanto inay isticmaalaan ogsijiinka dareeraha ah, tuubbo la'aan ay u gaarsiiyaan bukaanada, mana jiro nidaam gaarsiinta oo meelo badan oo fog ka jira.
Ogsijiin sidoo kale waxaa lagu heli karaa qaab gaas ka yar oo cufan, ddhalooyinka u baahan in la buuxiyo marar badan. Tani badanaa waa ikhtiyaarka qaaliga ah - waxay ku kici kartaa 10 jeer in ka badan inta badan ee oksijiinta dareeraha ah - laakiin waa tan keliya ee ay heli karaan bini-aadamka qaybo ka mid ah dunida soo koraya.
Fahamka dhibaatada Covid ee Hindiya
Waxa aad ubaahantahay Ogow
Yaraanta oksijiinta iyo sariiraha isbitaalada, iyo waliba heerarka talaalka oo hooseeya, ayaa sii xumeeyay kororka cudurada iyo dhimashada India. Tirada kiisaska:
Khubarada ayaa leh tirada dhimashada dhabta ah ayaa aad uga badan tirada rasmiga ah . Sawir gacmeedkani wuxuu muujinayaa sida kiisaska loo yaqaan ee 'Covid ' ay ugu kordheen bilihii dhowaa waddanka oo dhan. Mamnuucida Safarka:
Mareykanka ayaa bilaabay xadeynta safarada ka imanaya India, iyo
Australia ayaa mamnuucday dhamaan safarada soo gala dalka, oo ay ka mid yihiin muwaadiniinteeda. Sida loo caawiyo:
Deeq bixiyaasha aduunka oo idil waxay ugu deeqaan lacag cunto, kharashaad caafimaad, P.P.E. iyo haamaha ogsijiinta, iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah. Wadamo badan ayaa dadku ugu yaaceen inay u iibsadaan ama u buuxiyaan dhalooyinka noocan oo kale ah xubnaha qoyskooda, laakiin dalabku aad ayuu uga badan yahay sahayda. Isbitaallada qaar waxay leeyihiin warshado u gaar ah oo ay oksijiinta uga soo saaraan hawada, teknolojiyad loo yaqaanno cadaadiska qulqulka cadaadiska ama PSA Laakiin nidaamyadu waa qaali, isbitaalkuna mid wuu iibsadaa waa inuu sidoo kale rakibaa nidaam tuubo ah si oksijiin loogu geeyo sariirta
Waxa kale oo jira aalado yaryar oo loo yaqaan 'oxygen concentrators' oo u adeegi kara hal bukaan ama in yar. In kasta oo qofku ku kici karo dhowr boqol oo doollar, oo caqabad weyn ku ah dalalka saboolka ah, haddana dalabkooda ayaa aad uga kordhay kan shirkadaha wax soo saara.soo saaraan. Sawir
Farmashiye ku yaal tuulada Tuscan ee Castellina ee Chianti, Italy, ayaa safaf dhaadheer ku jira gasacadaha oksijiinta madhan ee dhabarka farmashiyaha. Bixinta ogsijiinta ku jirta gasacadaha ayaa 10 jeer ka qaalisan inta lagu geeyo tiro ahaan.
Nadia Shira Cohen ee Hfrance.fr
Maxaa loo baahan yahay si loo xaliyo dhibaatadan?
Lacag iyo waqti. U doodayaasha caafimaadka bulshada waxay dhahaan isbitaalada waa inay lahaadaan tas-hiilaadka PSA iyo dhuumaha lasocda, laakiin wadamada saboolka ah xalkaan wuxuu noqon karaa mid qaali ah, laguna guuleysan karo kaliya caawimaad caalami ah. Dowladda India ayaa qorsheyneysa inay qalabka ku rakibto boqolaal isbitaallo, laakiin waxay qaadan kartaa bilooyin. Shirkadaha sameeya warshadaha PSA iyo uruurinta oksijiinta ayaa kor u qaadaya wax soo saarka adduunka oo dhan, laakiin taasi sidoo kale waqti ayey qaadataa. Soosaarayaasha oksijiinta badan iyo lDawladuhu had iyo jeer waxay isku dayaan inay hagaajiyaan silsiladaha sahayda si ay gaas muhiim ah ugu gaaraan halka loogu baahan yahay. Hindiya gudaheeda, dowladdu waxay adeegsataa tareenno iyo xitaa diyaaradaha gaadiidka milatariga si ay oksijiin ugu keento kuwa jiran.
Haddii lacag ku filan la heli karo, dawladaha iyo kooxaha caalamku waxay lahaan lahaayeen heshiisyo iibsi hormaris ah oo ay la geysanayaan alaab-qeybiyeyaal badan, iyo agabka oksijiinta degdegga ah ayaa lagu rakibi karaa
Haddii aysan wax kale jirin, bilihii la soo dhaafay si cad ayaa loo muujiyay dhibaatada ay leedahay isku dayga lagu kordhinayo sahayda ogsijiinta ogeysiis gaaban, iyadoo lagu jiro xiisad.
Taa baddalkeeda, Mudane Matiru wuxuu yiri: Adduunku waa inuu maalgashi ku sameeyaa diyaargarowga, "marka haddii ay dhacdo koror xoog leh, waxaan riixi karnaa 'Go'.
Kala duwanaanshaha b.1.617 wuxuu ku qasbayaa Boqortooyada Midowday inay dadajiso maamulka qaadashada labaad
2021-05-15 15:11:32 | Adduunyada
Saraakiisha Boqortooyada Midowday waxay tixgelinayaan tallaalada la bartilmaameedsanayo iyo xaddidaadyo dheeri ah ka dib markii tirada kiisaska noocyadu ay saddex jibaarmeen toddobaad gudihiis. ...
Dalka Taiwan waxaa maalin walba laga soo tabiyaa 180 kiis
2021-05-15 12:52:16 | Adduunyada
Jasiiradda iskeed u maamusha, oo aragtay guulo la taaban karo oo fayraska ah, ayaa xaddidday xayiraadaha Taipei ka dib markii ay soo warisay 180 infekshan oo laga qaado dalka. ...
Nooc kala duwan oo markii ugu horraysay laga helay Hindiya ayaa ku qasbaya Boqortooyada Midowday inay dedejiso bixinta dawooyinka labaad
2021-05-15 02:07:49 | Adduunyada
Hey'adda qiimeynta: rabshadaha ayaa wiiqi kara dhaqaalaha Israel
2021-05-14 04:31:20 | Adduunyada
Rabshadaha iyo weerarada mooryaanta ayaa halis galin kara ka soo kabashada Israel ee saameynta dhaqaale ee masiibada, ayuu yiri Fitch. ...
Maamulaha guud ee shaqada: shaqaalaha ugu yar ee hawsha wada waxay ka shaqeeyaan guriga
2021-05-13 16:49:54 | Adduunyada
Faallooyinka Sandeep Mathrani ee munaasabaddii Wall Street Journal ayaa dood adag ka dhalisay Twitter. ...
Aleksei navalny wuxuu yiri waa qalfoof soconaya, wareegaya, qolkiisa.
2021-05-12 03:56:52 | Adduunyada
Dibadbaxyada ayaa ka bilaabmaya guud ahaan Ruushka iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa ay dalbanayaan in xabsiga laga siidaayo hogaamiyaha mucaaradka. ...
Adduunka waxaa laga yaabaa inuu barto inuu la noolaado fayraska
2021-05-12 02:22:03 | Adduunyada
In kasta oo dillaaca Hindiya helo dareenka ugu badan, gaaritaanka meel kasta oo fayrasku ka dhigan yahay waxay u muuqataa inay sii kordheyso inay ku sii socoto qaybo badan oo adduunka ah. ...
Rajooyinku way libdhaa xasaanadda wadareed ee adduunka
2021-05-11 20:56:57 | Adduunyada
Tallaalku wuxuu ku sii kordhayaa E.U. ka dib bilow dheer oo gaabis ah
2021-05-10 22:29:58 | Adduunyada
Kordhinta ayaa muujineysa kala duwanaanshaha adduunka ee dadaalka tallaalka. ...
Bukaannada isku-dhafan ee Hindiya waxay ku dhacaan halista fungal: mucormycosis
2021-05-10 13:28:52 | Adduunyada
Cudurka, oo loo yaqaan 'mucormycosis', ayaa umuuqda inuu ku dhacayo qaar ka mid ah bukaanada 'Covid' nidaamyada difaaca daciifka ah iyo xaaladaha hoose, gaar ahaan sonkorowga. ...
Mawjaddii labaad ee ugu weyneyd ee Turkiga ayaa hoos u dhacday iyada oo lagu jiro xirxirida gariirka
2021-05-10 11:59:31 | Adduunyada
Dowlada ayaa ku amartay shaqaalaha aan muhiimka aheyn inay guryahooda joogaan 29-ka Abriil, laakiin shaqaale badan oo dalka oo dhan ayaa laga dhaafay. ...
Fauci wuxuu leeyahay talobixinta ku saabsan maaskarada gudaha waa in laga fududeeyaa talaalada
2021-05-10 10:31:09 | Adduunyada
Faallooyinka ka imanaya lataliyaha guud ee madaxweyne Biden ayaa yimid laba maalmood un kadib markii xisbiga C. D. C. si daahsan u muujiyey halista gudbinta hawada. ...
Fayrasku wuxuu ku soo faafaa gudaha Alaska, wuxuu culeys saarayaa isbitaal ku yaal Fairbanks.
2021-05-09 23:55:52 | Adduunyada
Kiisaska cusub ayaa in ka badan labanlaab ka noqday labadii toddobaad ee la soo dhaafay xaafadda oo ay ku jirto magaalada, heerka sicir bararkuna wuxuu gaadhay ilaa 10%. ...
Ururinta tallaalka Hindiya ayaa joogsata maaddaama ay jabineyso rikoodhka kiisaska la wadaago
2021-05-09 23:54:45 | Adduunyada
Dacwadda waddanka ayaa weli ka sarraysa sidii horeba. ...
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa oggolaatay bixitaanka saraakiisha aan degdegga ahayn ee dowladda Hindiya
2021-05-09 18:06:45 | Adduunyada
Mareykanka ayaa sidoo kale ku boorinaya muwaadiniintiisa inay ka baxaan dalka. ...